TENY SALAMO 5 HIVAVAKA HO AN'NY ZANAKAO AMIN'NY ANDRO | TOKO VAVAKA
Home Andinin-tsoratra ao amin'ny Baiboly TENY SALAMO 5 HIVAVAKA HO AN'NY ZANAKAO AMIN'NY BEDTIME
TENY SALAMO 5 HIVAVAKA HO AN'NY ZANAKAO AMIN'NY BEDTIME
Androany dia hifandray amin'ny 5 isika Salamo andininy hivavahana ho an'ny zanakao alohan'ny hatory. Isika dia miaina amin'ny tontolo iray izay ahitàna ny kolikoly ho sivilizansa manimba ny fitomboan'ny zanatsika. Isan'andro, ny haino aman-jery sosialy dia mikiakiaka mafy amin'ny filan'ny ray aman-dreny handray andraikitra feno amin'ny fitaizana ny zanany ary tsy hamela azy ireo hitaona ny olon-tsy fantatra izay ivavahantsika amin'ny fotoana manaraka satria tsy mety manao izay andrasana amintsika amin'ny fotoana sy rahoviana. Jereo ny soratra masina eto ambany:
Psa. 127: 3-4 dia miteny hoe: “
Sarobidy amin'Andriamanitra ny zanaka, izy ireo dia fitahian'Andriamanitra amin'ny fianakaviana. Matetika isika maheno ny olona mivavaka ho an'ny mpivady vao mba ho voatahy amin'ny voankazo ny fanambadian'izy ireo. Ka rehefa voatahy amin'ireto voankazo ireto isika, toy ny hoe avy amin'Andriamanitra ny zanaka, ny adidin'ny ray aman-dreny dia ny hanao ny tsara amin'ny zanany amin'ny alàlan'ny fampiofanana azy ireo amin'ny lalana tokony halehany.
Hoy ny Ohabolana 22: 6, 'Zaro amin'ny làlana tokony halehany ny zaza; ary rehefa antitra izy, dia tsy hiala amin'izany.
Tsy azontsika atao ny tsy mirehareha amin'ny fitomboana sy ny fampiofanana ny zanatsika satria raha tsy ampiofanintsika eo am-piandohana dia lasa olana atahoran'ny ray aman-dreny ny ankizy toy izany ary manomboka mihazakazaka amin'ny andry izy ireo raha efa tara. Enga anie izany tsy tara ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny ankizy mahazo fiofanana avy any an-trano dia manamora ny mpampianatra azy any am-pianarana ary ireo dia lasa olom-pirenena mahasoa sy mahomby amin'ny fiarahamonina, ary koa eo an-daniny, ireo izay tsy manana fiofanana avy any an-trano dia manasarotra ireo mpampianatra any am-pianarana sy miantraika ratsy amin'ny fiarahamonina. Manapa-kevitra ny amin'izay tadiavinay ho an'ny zanatsika isika, na hanome voninahitra antsika izany na tsia, mila mandray anjara mavitrika amin'ny fitaizana ara-panahy ireo zanatsika isika.
Ilay manome laharam-pahamehana ny zavak'Andriamanitra dia afaka manome fotoana ho an'ny ankizy alohan'ny hatory. Tsy tokony ho be atao loatra isika etsy sy eroa mitady vola hamelomana ny ankohonantsika ka tsy miraharaha ny lafiny ara-panahy amin'ny fianan'ny zanakay. Ka manomboka amin'ny fanekena ny toeran'Andriamanitra ao an-tranontsika izany, amin'ny zavatra ataontsika, amin'ny resaka ataontsika, Andriamanitra ve dia hita amin'ny fifandraisantsika tsirairay, reny amin'ny ray?
Amin'ny zavatra ilaintsika ny sofintsika, raha tsy zatra mihaino hira tsy matahotra an-trano any an-trano i David, dia tonga ao an-tsainy fa misy zavatra tsara lavitra noho ny any ivelany. Ka taratry ny zavatra atao ao an-trano izany izay hita amin'ny zava-mitranga alohan'ny hatory. Amin'ny tranga izay raha tsy izany dia afaka manao fanovana isika, afaka manomboka zavatra iray, tsy tara loatra izany.
Amin'ity fizarana ity dia mivavaka amin'ny bokin'ny salamo ho an'ny zanatsika amin'ny fotoam-pandriana izy ireo.
Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao izahay noho ny fanomezana fiainana omenao anay, izahay milaza fa hotahina anie ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao izahay nitahiry ny ain'ny fahatsiarovana tsirairay ny fianakavianay, hoy izahay, enga anie hisandratra avo amin'ny anaran'ny Jesosy ny anaranao.
Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao izahay noho ny aminao mitondra ny tombotsoanay isan'andro, misaotra anay izahay Tompoko noho ny famatsiana isan'andro, ho fanohanana, fiarovana, isaorana anie ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Raiko, misaotra noho ny fitahian'ny zanaka, misaotra anao izahay noho ny fitahianao ny fanambadianay zanaka mahafinaritra, ny teninao dia milaza fa ny zanakao no lovanao, ekenay ny asanao ao an-tranonay, asandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao.
Hoy ny Psa 3: 5: Nandry aho, dia natory; Nifoha aho; fa ny Tompo no nanohana ahy.
Ray amin'ny anaran'i Jesosy, matory tsara ny zanako ary mifoha amin'ny trano maraina ary mahasalama amin'ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Manaraka ny andininy ao amin'ny Psa. 3. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, avelao ho fiarovana ambonin'ny zanako vavy sy zanako lahy ny ampinganao anio alina amin'ny anarana mahery an'i Jesoa Kristy.
Amin'ny anaran'i Jesosy dia mivavaka aho mba tsy hamelezan'ny fahavalo ny voako anio hariva sy any aoriana, ny drafitry ny fahavalo ny amin'ny zanako lahy sy vavy dia tsy ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Psa. 4: 8 dia miteny hoe: 'Handry am-piadanana aho ka hatory; fa Ianao, Tompoko, mampitoetra ahy mandry fahizay '.
Ray amin'ny anaran'i Jesosy, natolotro eo an-tananao ny zanako, rehefa mandry eo am-pandriana anio hariva izy ireo, mandry fahizay amin'ny herinao amin'ny anaran'i Jesosy, ianao no Vatolampy anay, Vonjeo sy fiarovana anay, arovy amin'ny herinao izy ireo. tanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Psa. 42: 8 dia miteny hoe: 'Fa ny Tompo handidy ny famindram-pony nony andro, ary amin'ny alina ho ao amiko ny hirany, ary ny vavaka ataoko amin'Andriamanitry ny fiainako'.
Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivavaka aho mba hametrahan'ny tananao ny zanako amin'ny antoandro rehefa mandeha amin'ny asany izy ireo ary amin'ny mitataovovonana rehefa mametraka ny lohany hatory amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo.
Psa. Hoy ny 91:11 'Fa Izy handidy ny anjeliny ny aminao Mba hiaro anao amin'ny lalanao rehetra.' Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka aminao aho ny anjelinao mba hiambina ny zanako, ny anjelin'Andriamanitra hitandrina azy amin'ny alehany rehetra, rehefa mametraka ny lohany hatory amin'ny anaran'i Jesosy izy ireo.
Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka aho fa isaky ny mandry natory ny zanako, dia halefa ireo anjelin'Andriamanitra hiambina azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Psa. Hoy ny 121: 7: 'Hiaro anao amin'ny ratsy rehetra ny Tompo; hiaro ny fanahinao izy.'
Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny zanako dia voatahiry eo am-pelantanananao rehefa matory amin'ny alina sy amin'ny antoandro amin'ny anaran'i Jesosy mahery izy ireo.
Ry Ray any an-danitra, ianao no mpiambina an'i Isiraely izay tsy matory na tsy rendrehana, mivavaka aho mba hiarovan'ny tananao mahery ny zanako tsy haratsiana, hotehirizinao ho eo ambany fiandraiketanao izy ireo, hitoetra eo aminao amin'ny toerana azo antoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo.
Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mivavaka aho mba hiarovanao ny zanako amin'ny mason'ilay ratsy, hiaro azy amin'ny zana-tsipìka manidina andro aman'alina amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy ianao.
Ray ô, misaotra anao aho fa mihaino anay mandrakariva ianao, isaorana anie ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.
Previous lahatsoratraTeboka vavaka Hivavaka rehefa miahiahy ianao
Next lahatsoratraTeboka vavaka 5 hivavahana ho an'ny tranonao
Ny vavaka ho fiarovana sy fanafahana amin'ny fanafihan'ny fahavalo